ဖတ်စေချင်တယ် - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
Posted by ukkmaung on June 26, 2014 at 9:35am
သင်ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာ သိဖို့၊ ကျွန်ုပ် ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာ သိဖို့ အလိုဆန္ဒ ရှိနေတဲ့ သင်နှင့်ကျွန်ုပ် ...နေမြင့်ရှည်ကြာ သွားလာနေထိုင် ဆက်ဆံရင်း စူးစမ်းလေ့လာကြရ ဦးမှာပါ။ အမှားအမှန် အဆိုးအကောင်း သိမြင်နိုင်တဲ့ ဥာဏ်ပညာ အဆင်အခြင် ရှိ မရှိပေါ်မှီပြီး ...
သင်နှင့်ကျွန်ုပ် အဖြေမှန်ရသည်လည်း ရှိမယ်၊ အဖြေမှန် မရသည်လည်း ရှိလိမ့်ဦးမယ်လို့တော့ သတိရှိစေချင်ပါတယ်။ (~ ဗုဒ္ဓ ~ သတ္တဇဋိလသုတ်)။
- မိမိကိုယ်ကို မိမိ သိပ်သိတဲ့ သိပ်တတ်တဲ့ပုံစံမျိုး နေထိုင်မိတတ်ကြတယ်။ တကယ်တော့ မိမိတို့မှာ အဲဒီလိုအနေအထားမျိုး ရှိမနေကြဘူး၊ သိနိုင်သလောက် သိအောင် ကြိုးစားနေခြင်းမျှသာ ဖြစ်ကြတယ်။
- မပြည်ဝသေးတာ မပြည်ဝသေးမှန်းသိရင် စိတ်ဟာလွတ်လပ်သွားတယ်၊ သိယုံနဲ့မလုံလောက်ဘူး၊ ကိုယ်သိတာ ဒီလောက်ပါပဲလို့ လိုအပ်တဲ့အခါ ၀န်ခံလိုက်တာ အနှောင်အဖွဲ့ကနေ ထွက်မြောက်ခြင်း တစ်မျိုးပဲ။ စိတ်မှာ ၀န်ထုပ် ၀န်ပိုးဖြစ်ပီး မကျန်ရစ်တော့ဘူး။ ဟန်ကိုယ့်ထားရတဲ့ ဒုက္ခကနေ ထွက်မြောက်နိုင်လိုက်တဲ့အတွက် စိတ်ဟာတည်ကြည်လာတယ်၊ ခံ့ကျန်းလာတယ်၊ ရင့်ကျက် လာတယ်။
- မိမိကိုယ်ကို မိမိ နှောင်ဖွဲ့နေတာလည်းမသိဘူး၊ သူတစ်ပါးတို့ရဲ့ နှောင်ဖွဲ့တာခံနေရမှန်းလည်း မသိဘူးဆိုရင် မိမိရဲ့ချမ်းသာကို ဆောင်နိုင်ဖို့မလွယ်တော့ဘူး။ သူတစ်ပါးတို့ရဲ့ ချမ်းသာခြင်း ကိုလည်း ဆောင်ခြင်းငှာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။
- လူတွေရဲ့ အလိုဆန္ဒကို အမြဲသိဖို့မလွယ်ဘူး။ ဥာဏ်နှင့်ယှဉ်တဲ့ သည်းခံမှု ထိန်းသိမ်း ချုပ်တည်းမှုတွေကြောင့် သိဖို့ရန်ခက်သလို, မာယာ သာဌေယျ အလှည့်အပတ် အကွေ့ အကောက်တွေ နေရာယူမှုကြောင့်လည်း သိဖို့ရာခက်တယ်။
- ပုံမကျတာတွေ မဟုတ်တာတွေ တရားမမျှတတာတွေ အချိုးမကျတာတွေတွေ့လို့ ဝေဖန် ထောက်ပြသူ တွန်းလှန်သူ ဆန့်ကျင်သူတွေကိုတွေ့ရင် အမှန်တရားထွန်းကားဖို့ လောကကြီးကို ပုံစံတကျတည်ဆောက်ဖို့ စေတနာဆန္ဒရှိနေသူများလို့ လက်ခံတတ်တဲ့စိတ် ကျွန်ုပ်တို့မှာရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
- He hasaright to criticize, who hasaheart to help. " အားနည်းချက်တွေ အမှားတွေ ပုံမကျတာတွေ မကောင်းတာတွေကို ဝေဖန်ထောက်ပြခြင်းဆိုတာ ကူညီလိုတဲ့ နှလုံးသားရှိသူရဲ့ အခွင့်ပဲ။ " (~ Abraham Lincoln)
- သို့သော် " မစူးစမ်း မဆင်ခြင်ပဲ တစ်ပါးသူတွေရဲ့ဂုဏ် တစ်ပါးသူတွေရဲ့ အပြစ်ကို ပြောဆိုတတ် သူတွေကိုတော့ မိုက်မဲသူ မလိမ္မာသူလို့ " ဘုရားရှင် မိန့်တော်မူထားတဲ့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ မိုက်မဲသူ မလိမ္မာသူတွေတော့ မဖြစ်သင့်ကြဘူး။
- စာတတ်တယ်ဆိုတာ အာဂုံနှုတ်တက်ဆောင်နိုင်ရုံမျှကို ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ နားလည် သဘောပေါက်အောင် ကြည့်ရှုနိုင်စွမ်းကိုခေါ်တာ။ (~ မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်)
-Suffering arises out of desire not to suffer." " ဒုက္ခမဖြစ်လိုတဲ့ ဆန္ဒကြောင့် ဒုက္ခဖြစ်ရတာပါ။"
- တစ်လောကလုံး ရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့ ဒုက္ခဟူသမျှဟာ လိုချင်ခြင်းကြောင့် ရရှိလာတဲ့ ဒုက္ခ များသာဖြစ်ကြတယ်။ မလိုချင်ပဲနှင့် ရရှိလာတဲ့ အရာတွေမဟုတ်ကြဘူး။
- လောကမှ မလွတ်မြောက်နိုင်သေးတဲ့ အောင်မြင်မှုမှန်သမျှဟာ အောင်မြင်မှု အစစ်အမှန် မဟုတ်ဘူး။ အောင်မြင်မှု ကျော်စောမှု ထင်ပေါ်မှုအတွက် အလုပ်လုပ်နေသူမှန်သမျှရဲ့ စိတ်ဟာ တဏှာကြောင့် ဆာလောင်နေတယ်၊ စိုးရိမ်နေတယ်၊ မ၀ံ့မရဲဖြစ်နေတယ်၊ မလိုမကျဖြစ်နေတယ်၊ သူတစ်ပါးလက်ခံအောင်ကြိုးစားဖို့ ကြောင့်ကြဗျာပါရများနေတယ်၊ တွေဝေနေတယ်၊ တုန်လှုပ် နေတယ်၊ မငြိမ်းချမ်းဘူး။
- တဏှာကြောင့် လိုနေတဲ့လောကကြီးက မိမိလိုချင်တာ ပေးနိုင်မည့်သူထံ သွားကြ လာကြတယ်။ မိမိလိုချင်တာ မပေးနိုင်ဘူးလို့ အထင်ရောက်တဲ့အခါ ဖယ်ခွါသွားကြမှာပါပဲ။ လိုချင်တာ ပေးနိုင် မယ်လို့ ယူဆတဲ့ တစ်ပါးသူတွေထံချဉ်းကပ်ဖို့ပေါ့။ အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာ မတုန်လှုပ်ပါနဲ့။ ဒါဟာ လောက သဘာဝတစ်ခုပါ။ တစ်ပါးသူတို့ရဲ့ လက်ခံခြင်းဟာ လွတ်မြောက်လိုသူတွေအတွက် အနှောင်အဖွဲ့ တွေပါ။ အနှောင်အဖွဲ့ခံနေရတယ်လို့ သဘောမပေါက်နိုင်လောက်အောင် လိုချင်မှုတဏှာရဲ့ လှည့်ကွက်ကို သတ္တ၀ါတွေခံကြရတယ်။ တဏှာမရှိတော့တဲ့ အချိန်ရောက်မှ စိတ်ဟာလွတ်လပ် သွားမယ်၊ ငြိမ်းချမ်းသွားမယ်။
- တဏှာကင်းတဲ့အချိန်ဟာ အောင်မြင်တဲ့အချိန်ပဲ။ တဏှာကင်းသွားတဲ့အချိန်မှာ လွတ်မြောက်ခွင့် ရကြတယ်။ လွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေ။ (~ အရှင်ရေ၀တ)
- ရန်သူတွေကို ဖျက်ဆီးချင်နေသူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပေးလိုက်မယ်။ မိတ်ဆွေဖွဲ့ လိုက်ပါ။
- လူ့တန်ဖိုးဟာ သက်မဲ့ပစ္စည်းအောက် မရောက်သင့်ဘူး။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးကို သက်မဲ့ ပစ္စည်းလောက်တောင် တန်ဖိုးမထားဘူးဆိုရင် ဒီလောကကြီးကို လူ့တန်ဖိုးသိတဲ့ လောကလို့ မခေါ်နိုင်ဘူး။ သက်မဲ့ပစ္စည်းနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို အလဲအလှယ်လုပ်နေကြတာ, သက်မဲ့ပစ္စည်းအတွက် ငြင်းခုန် စကားများနေကြတာ, သက်မဲ့ပစ္စည်းအတွက် သက်ရှိတွေကို ညှင်းပမ်းနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်နေကြတာ ဘာကိုတန်ဖိုးထားကြတာလဲ၊ ဒီလိုလူတွေဟာ လူမဖြစ်ကြသေးဘူး၊ အသိဥာဏ်မရှိတဲ့ တိရစ္ဆာန်အတင့်မှာပဲ ရှိနေကြသေးတယ်။
- လူဆိုတာ အသိဥာဏ်ရှိတဲ့သူ, ကောင်းချင်တဲ့သူ, တိုးတက်ချင်တဲ့သူပါ။ သတိလွတ်ကင်းလို့ တစ်ချိန်ကမှားခဲ့ပေမယ့် မိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပီး ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွ လောကမှာ များစွာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေ့သစ်တွေမှာ တွေ့ဆုံရတဲ့သူတွေကို ဘ၀သစ်တဖန် မွေးဖွားလာတဲ့ သူတွေအဖြစ် ကြည့်တတ်အောင်လေ့ကျင့်မယ်။
- တစ်လောကလုံး တရားပျက်နေကြရင်တောင် တရားမပျက်စေရဘူး။ လူမိုက်တွေအကြောင့် စဉ်းစားပီးစိတ်မပျက်ပါနဲ့။ ဆူးနွယ် ချုံရှုပ်တွေပေါများတဲ့ တောကြီးထဲက သစ်ပင်ကြီးဟာ ဆူးနွယ် ချုံရှုပ်တွေမည်မျှပင်ရှိနေပါသော်လည်း သက်တမ်းရှိသလောက် သူရဲ့ဘ၀ကို ငါဟာသစ်ပင်ကြီးပါလို့ ကွဲကွဲပြားပြား ရပ်တည်သွားသလိုပဲ ... မိမိအကြောင်း မိမိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဆူးနွယ် ချုံရှုပ် ကဲ့သို့သော ကျေးဇူးမဲ့ပြုတတ်သူတွေ ရှိနေပါသော်လည်းပဲ သက်တမ်းရှိသလောက် ငါဟာ ကျေးဇူးပြုသူတွေရဲ့ ကျေးဇူးကိုသော်လည်း ပြုနေသူပါလို့ မပြောသော်လည်း ပြောသကဲ့သို့ မိမိဘ၀ကို ကွဲကွဲပြားပြားရပ်တည်သွားမယ်။
- ပြုပြင်ဖေးမခြင်းဟာ ညီညွတ်သွေးစည်းခြင်းရဲ့ စည်းကြိုးဖြစ်တယ်။ မအောင့်အီးနိုင်လို့ သူတစ်ပါးအကြောင်းကို ပြောချင်ရင် ကောင်းတာလေးတွေကို ရွေးပြောပါ။
(~ ဘဒ္ဒန္တပညာဘောဂ (ဆဌသင်္ဂီတိထေရ)
by သံ စဉ်